.စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာမှာတောင် သေသေချာချာ ဖော်ပြခြင်းခံနေရတဲ့အထိကို တစ်ရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်. – Askstyle
.စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာမှာတောင် သေသေချာချာ ဖော်ပြခြင်းခံနေရတဲ့အထိကို တစ်ရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်.
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချောလေးပိုင်တံခွန်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးပေမယ့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့အနုပညာအရည်အသွေးတွေကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပိုတိုးတက်လာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားပေးရကျိုးနပ်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာသာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအထိပါရေပန်းစားနေလို့ မြန်မာပြည်အတွက် ဂုဏ်ယူရပါတယ်နော်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်က ထိုင်းနိုင်ငံက မိန်းကလေးတွေကြားမှာ အရမ်းရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံက ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးတွေနဲ့လည်း ကြော်ငြာတွေအတူတူရိုက်ကူးရလို့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အနုပညာစန်းက အရမ်းကောင်းပါတယ်နော်။ပိုင်တံခွန်က အရမ်းအောင်မြင်လာပေမယ့်လည်းမာန်မာနမကြီးဘဲ သဘောကောင်းဖော်ရွေပြီး ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းလေးစားလို့ လူတိုင်းကချစ်ခင်အားပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်က တရုတ်ပြည်မှာပါ ဆက်လက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန် ရဟန်းဝတ်တုန်းကပုံတွေဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ “ခန့်ညားတဲ့ဘုန်းကြီး”ဆိုပြီး Weibo hot searchထဲမှာ No.20နေရာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ကတော့ “တရုတ်လိုပါသင်ရတော့မယ် ထင်တယ်”ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံကပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေက ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထရလောက်အောင်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလို့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသားေခ်ာေလးပိုင္တံခြန္ကေတာ့ အသက္ငယ္ငယ္ေလးပဲရွိေသးေပမယ့္ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုကိုယ္တိုင္ရွာေဖြထားတာျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အႏုပညာအရည္အေသြးေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုပိုတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအားေပးရက်ိဳးနပ္တဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာသာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအထိပါေရပန္းစားေနလို႔ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဂုဏ္ယူရပါတယ္ေနာ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဆိုရင္လည္း ပိုင္တံခြန္က ထိုင္းႏိုင္ငံက မိန္းကေလးေတြၾကားမွာ အရမ္းေရပန္းစားေအာင္ျမင္ခဲ့ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံက ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲမင္းသမီးေတြနဲ႔လည္း ေၾကာ္ျငာေတြအတူတူ႐ိုက္ကူးရလို႔ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အႏုပညာစန္းက အရမ္းေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ပိုင္တံခြန္က အရမ္းေအာင္ျမင္လာေပမယ့္လည္းမာန္မာနမႀကီးဘဲ သေဘာေကာင္းေဖာ္ေ႐ြၿပီး ပရိသတ္ေတြအေပၚမွာလည္းေလးစားလို႔ လူတိုင္းကခ်စ္ခင္အားေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္လည္း ပိုင္တံခြန္က တ႐ုတ္ျပည္မွာပါ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ ရဟန္းဝတ္တုန္းကပုံေတြဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ “ခန႔္ညားတဲ့ဘုန္းႀကီး”ဆိုၿပီး Weibo hot searchထဲမွာ No.20ေနရာေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ “တ႐ုတ္လိုပါသင္ရေတာ့မယ္ ထင္တယ္”ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကပရိသတ္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြက ၾကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထရေလာက္ေအာင္ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။